आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ चैत्र १४ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस् – Khabar Art Nepal
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ चैत्र १४ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्
By Pasang Tamang	 On १४ चैत्र २०७५, बिहीबार ००:३२
काठमाडौं।ग्रहाः।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण, वसन्तर्तुः विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रम सम्वत २०७५ साल चैत्र १४ गते विहिबार नेपाल सम्बत ११३९ चिल्लागा तदनुसार सन् २०१९ मार्च २८ तारिक कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि राती १ वजेर ४१ मिनेट सम्म उप्रान्त नवमी तिथि,मूल नक्षत्र अपरान्ह १ वजेर ३४ मिनेटसम्म उप्रान्त पूर्वषाढा नक्षत्र,वरियनयोग,बालवकरण, आनन्दादियोग धुम्र,सूर्य मीन राशीमा,चन्द्रमा धनु राशीमा । योगिनी ईशान्य दिशामा,काल दक्षिण र पाश उत्तर दिशामा, शुक्र पूर्व र चन्द्रमा पूर्व दिशामा दिनभर भ्रमण गर्ने छन् ।
यात्र र युद्धमा सम्मुख काल पाश पार्नु हुदैन । काल दाहिने र पाश देव्रे शुभ हुन्छ । जुवा खेल्न,बहस गर्न,यात्रा र सङ्ग्राममा सम्मुख योगिनी वर्जित छ भने आफ्नो राशिमा चन्द्रमा हुदा यात्रा,युद्ध,विवाह,क्षौर कर्म र गृहप्रवेश गर्नु उचित मानिन्न । यात्रा गर्दा विशेष गरेर स्त्री जातिको लागि दाँया र सम्मुख शुक्र अशुभ मानिन्छ ।
मुहूर्त अशुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ४४ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ३४ मिनेटसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान ९ वजेर ५ मिनेटबाट १० वजेर ३७ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–अपरान्ह १ वजेर ४१ मिनेटबाट ३ वजेर १३ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ६ वजेर २ मिनेटबाट ७ वजेर ३४ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः– विहान १० वजेर ६ मिनेटबाट १० वजेर ५५ मिनेटसम्म र अपरान्ह ३ वजेर ३ मिनेटबाट ३ वजेर ५० मिनेटसम्म रहनेछ ।
दिन बार वेला सूर्योदयबाट प्रातः ७ वजेर ३४ मिनेटसम्म शुभ वेला,७ वजेर ३४ मिनेटबाट ९ वजेर ६ मिनेटसम्म रोग वेला,९ वजेर ६ मिनेटबाट १० वजेर ३८ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१० वजेर ३८ मिनेटबाट १२ वजेर १० मिनेटसम्म चर वेला,१२ वजेर १० मिनेटबाट १ वजेर ४२ मिनेटसम्म लाभ वेला,१ वजेर ४२ मिनेटबाट ३ वजेर १४ मिनेटसम्म अमृत वेला,३ वजेर १४ मिनेटबाट ४ वजेर ४६ मिनेटसम्म काल वेला र ४ वजेर ४६ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
रात्री बार वेला सूर्यास्त कालबाट ७ वजेर ४६ मिनेटसम्म अमृत वेला,७ वजेर ४६ मिनेटबाट ९ वजेर १४ मिनेटसम्म चर वेला,९वजेर १४ मिनेटबाट १० वजेर ४२ मिनेटसम्म रोग वेला,१० वजेर ४२ मिनेटबाट १२ वजेर १० मिनेटसम्म काल वेला, १२ वजेर १० मिनेटबाट १ वजेर ३८ मिनेटसम्म लाभ वेला,१ वजेर ३८ मिनेटबाट ३ वजेर ६ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,३ वजेर ६ मिनेटबाट ४ वजेर ३४ मिनेटसम्म शुभ र ४ वजेर ३४ मिनेटबाट सूर्योदय कालसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
समय सुधारोन्मुख तर पूर्ण साथ दिने छैन । कपटीहरुको फेला पर्न सकिन्छ सतर्क भएर काम गर्नु होला । अरुको काम गरेर जश कम मिल्नेछ । लाभदायक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । आशाका अङ्कुर पलाउनेछ । पढाईमा ध्यान कम जानेछ ।
समयले साथ कम दिनछ । काम गर्दा दुःख कष्ट हैरानी बढि हुनेछ । विचार पु¥याउन सकिएन भने कर्म क्षेत्रबाट रित्तो हात फर्कनु पर्ला । पारिवारिक समस्या बढ्न सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । विश्वास र भरोसामा काम गर्न सकिने छैन । कपटीका हातमा धन पर्न सक्छ सतर्क रहनुहोला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
ग्रह,गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । कुरामा विश्वास नगर्नु होला काममा ध्यान दिनुहोला । कर्म अनुसारको फल मिल्नेछ । सतर्क रहनु होला,देखिने शत्रु भन्दा नदेखिएका शत्रु बढि हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ । तनावले छोड्ने छैन । आहार विहारमा ध्यान दिन सकिएन भने स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । ऋण लगानीमा नगर्नु होला पछि उठाउन गाह्रो हुनेछ । काममा प्रतिश्पर्धा गर्नु पर्नेछ । विरोधीको सक्रियता बढ्नेछ । काम गर्दा गोपनियता अप्नाउनु होला ।
भ्रम छलकपट बढि हुनेहुदा सोचेर विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला । विना तयारी विना अध्ययनको कामले घाटा हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । पढाई लेखाईमा अवरोध आउन सक्छ । आफन्तको सहयोग अल्प मिल्नेछ । समस्याबाट पूर्ण मुक्ति मिल्ने छैन । आय व्यय बरावरै हुनेछ ।
कार्य क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । घरका समस्याले बढि सताउने छ । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । विवाद रहित काम गर्न सकिने छैन । आफुमा भएको उर्जाको सहि सदुपयोग गर्न सके पछुताउनु पर्ने छैन । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । आफन्त सँग विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन ।
समयले साथ दिनेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । उच्च व्यक्तित्वको सुझाव सल्लाहमा काम गर्दा राम्रै हुनेछ । आफ्नै बाहुबलबाट धेरै काम सम्पादन हुनेछन् र अर्थोपाजन पनि हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । साथि भाई इष्टमित्रबाट सहयोग प्राप्त होला । भ्रमलाई चिरेर काम गर्नु होला ।
दिन सामान्य देखिन्छ । आर्थिक लगानीमा जोड नदिनु होला । धन दिएमा फिर्ता नहुन सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । अरुको पूर्ण भरोसा नगर्नु होला । मान्य जनको सुझाव सहयोग र आशिर्वाद लिएर काम गर्नु होला । महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढाउदा विचार पु¥याउनु होला ।
समस्या कम भएर जानेछन् । काममा विस्तारै प्रगति हुनेछ । मनोरञ्जनात्मक काममा खर्च ज्यादा हुनेछ । अरुको भर नपर्नु होला । वित्तिय कारोवारमा सानातिना समस्या देखिने छन् । भोज भतेरको निम्तो आउन सक्छ । स्पष्ट बोल्दा आफैलाई घाटा हुनसक्छ । कार्य गोपनियता अप्नाएर काम गर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा सुधार आउनेछ ।
समय प्रतिकुल देखिन्छ । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । दूर्जनले दुःख दिनेछन् । पारिवारिक समस्या बढ्नेछन् । व्यर्थका काममा समय खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । अहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । फजुल खर्च बढ्नेछ । झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ ।
समयको सदुपयोग गर्नु होला उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ । हिजो विरोध गर्ने आज मित्र बनेर आउने छन् । आफन्तका कारण लाभान्वित हुनुहुनेछ । आम्दानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै होला । घरमा मांगलिक काम हुनेछन् । मित्रहरु बढ्ने छन् ।
समस्याहरु घट्ने छन् । सुख शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । कुटनैतिक विधि अप्नाएर अगाडि बढ्नु होला । सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ । सहयोगी हात भेटिने छन् । काम गरेर प्रशस्त धन कमाउने योग देखिन्छ । परिवारबाट सहयोग पाईनेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
यसरी रहन गयो भगवान शिवको पशुपति नाम
भारतबाट तेल लिएर नेपाल तर्फ आउँदै गरेको ट्याङ्कर दुर्घटना